HomeTurkeyMpaghara Aegean20 DenizliDenizli Ski Center na-agba ọsọ na ndekọ ahụ na ọnụọgụ ndị nleta
13 / 01 / 2020 20 Denizli, Mpaghara Aegean, General, Turkey, TELPHER
denizli sk Resort na-edekọ ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa
Denizli Ski Center, nke bụ otu n'ime ebe kachasị amasị egwuregwu maka oge oyi, na-agba ọsọ na ndekọ ahụ yana ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa. Ihe dị ka mmadụ 50.000 gara leta etiti oge ọhụrụ a, Mayor Osman Zolan na nwunye ya, Berrin Zolan, ghọrọ ndị mmekọ na uru nke ụmụ amaala.
Denizli Ski Center, nke bụ otu n'ime ọrụ kachasị mkpa nke Denizli Metropolitan Obodo mepere, na-agba ọsọ ịdekọ ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa. Nso nso a, otu n'ime ndị kasị họọrọ ebe oyi egwuregwu na Turkey na 4 bụ banyere 50 puku ndị ọbịa kwadoro site ị na-ahọrọ a Denizli Ski ruo ọhụrụ oge ugbu a. Turkey si aga n'ihu na usu ụmụ amaala na-chọrọ izute ọtụtụ ndị obodo nke ọkachamara na-amu amu skiers na snowboarders 7 na 70 ụlọ ọrụ ịnabata ndị chọrọ na-eme na snow. Onye isi obodo nke Denizli Obodo ukwu Osman Zolan na nwunye ya Berrin Zolan gara leta ebe egwuregwu.
Ha na ụmụ anyị nwere obi ụtọ
Maazị Osman Zolan na nwunye ya Berrin Zolan, ndị ha na ibe ha na -enweta uru nke ụmụ amaala, ji obi ụtọ gosipụta ebe a. N’igosi na ha nwere nnukwu obi uto n’ebe Denizli Ski Center, ụmụ amaala kelere Mayor Zolan maka iweta obodo ahụ njem. Maazị Osman Zolan so ụmụ amaala na-akparịta ụka nwa oge, na-akpali ntakịrị nke ụmụaka na-adọkpụ n'ógbè sled bụ ngosipụta nke ihe osise mara mma. Otutu ihe ncheta ndi mmadu na ndi umu akwukwo n’oge nleta ndi Zolan buru ndi isi M3. Maazị Zolan zutere ụmụ obere ụmụaka ahụ ndị Denizli Obodo ukwu na-ahụ maka egwuregwu ski na n'efu.
“Osimiri anyị nwere ikwu na oge njem nlegharị nka artık
Onye isi obodo Osman Zolan kwupụtara na ha nwere obi ụtọ maka nnukwu mmasị na Denizli Ski Center nakwa na ụlọ ọrụ ahụ abịawo ogologo oge na obere oge na ha bụ otu n'ime ebe kachasị amasị egwuregwu maka oge oyi n'oge na-adịbeghị anya. N’imesi ike na ike oke kristal dị na Denizli Ski Center dị n’ọtụtụ akụrụngwa n’ụwa, Maazị Zolan kwuru, “Site n’okporo ụzọ sklo anyị dị ogologo iri na atọ na-ejikọ ndị amateur na ndị ọrụ aka ọrụ, akụrụngwa anyị nwere ike ibute mmadụ 13 kwa elekere, ụlọ ọrụ mmekọrịta anyị na-egbo mkpa ụbọchị ndị ọbịa anyị abụghị naanị Denizli. anyị na-efe ụmụ amaala anyị n'otu akụkụ. Anyị nwere ụlọ mara mma nke nwere ikuku, runways na akụrụngwa niile. Mmasị na nnukwu ebe akwa Aegean na-abawanye kwa ụbọchị. Osimiri anyị nwere asịsa na njem nlegharị n'oge oyi. "
Usoro Mgbasa Ozi Ọhụụ nke Antalya na-agba ọsọ na Dekọọ
Olympos Cable Car Running to Record
Egwuregwu Ski Ergan Mountain na-echere ndị niile na-agba ọsọ ski na ndị ọbịa
TCDD na-agba ọsọ ọsọ na njem njem njem na njem
Ụlọ ọrụ ịgbazinye ego ahụ na-agbazi dollar 6 site na akwa, okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ oloko!
Ndị na-arụ ọrụ na-agba ọsọ n'okporo ụzọ
China na-agba ọsọ na metro-ogologo oge ụwa
Karacadağ Ski Center setịpụ ndekọ ndị ọbịa
400 puku ndị ọbịa na Davraz Ski Resort
Murat Mountain Thermal Ski Center na-eche ndị ọbịa
Onye United States na-agba Vonn na-edekọ
İZBAN na-aga ndekọ
Obodo ukwu dị na Denizli
Mpaghara ahịhịa nke Denizli ski ntụrụndụ
Ndị ọbịa na Denizli Ski Center